တရုတ် CI ဂိတ် Valve အနားကွပ်အမြင့်ဖိအားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Keguang
တစ်ဦးကအဆို့ရှင်မရှိသလောက်ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်သတိပြုမိနေတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, သေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၏အရည်အသွေးအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ သငျသညျ, တစ်ရေ faucet ဖွင့်သင့်ရဲ့ပန်းကန်ဆေးစက်ကိုသုံးသင့်ကားရဲ့ accelerator အပေါ်တစ်ဦးဓာတ်ငွေ့အပိုင်းအခြားသို့မဟုတ်ခြေလှမ်းကိုဖွင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သင်ကအဆို့ရှင် operate ။ ခေတ်သစ်အဆို့ရှင်စနစ်များကိုမရှိရင်, သင့်အိမ်မှာလတ်ဆတ်သန့်စင်သောရေသို့မဟုတ်အော်တိုအပူအဘယ်သူမျှမရှိပါလိမ့်မယ်။ မရှိပြည်သူ့ utilities ဖြစ်, ထင်းများနှင့်ကျောက်မီးသွေးထက် ကျော်လွန်. မဆိုကြင်နာနီးပါးမျှမစွမ်းအင်လိမ့်မယ်။ ပလတ်စတစ်အများအပြားလိုအဖြစ်၏ကြားဖူးပါလိမ့်မယ် ...
တစ်ဦးကအဆို့ရှင်မရှိသလောက်ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်သတိပြုမိနေတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, သေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၏အရည်အသွေးအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ သငျသညျ, တစ်ရေ faucet ဖွင့်သင့်ရဲ့ပန်းကန်ဆေးစက်ကိုသုံးသင့်ကားရဲ့ accelerator အပေါ်တစ်ဦးဓာတ်ငွေ့အပိုင်းအခြားသို့မဟုတ်ခြေလှမ်းကိုဖွင့်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သင်ကအဆို့ရှင် operate ။ ခေတ်သစ်အဆို့ရှင်စနစ်များကိုမရှိရင်, သင့်အိမ်မှာလတ်ဆတ်သန့်စင်သောရေသို့မဟုတ်အော်တိုအပူအဘယ်သူမျှမရှိပါလိမ့်မယ်။ မရှိပြည်သူ့ utilities ဖြစ်, ထင်းများနှင့်ကျောက်မီးသွေးထက် ကျော်လွန်. မဆိုကြင်နာနီးပါးမျှမစွမ်းအင်လိမ့်မယ်။ ပလတ်စတစ်အများအပြားစျေးသိပ်မကြီးတဲ့စားသုံးသူထုတ်ကုန်လိုအဖြစ်၏ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။
ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်တစ်ဆို့ရှင်တစ်ဦးအရည်စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိရိယာဖြစ်သည်။ ယနေ့အဆို့ရှင်စီးဆင်းမှု, ဒါပေမယ့်နှုန်း, volume ကို, ဖိအားတစ်ခုသို့မဟုတ်ပိုက်လိုင်း, ဖွညျးညှငျးစှာရလြှောဆငျးခွငျးသို့မဟုတ်အလားတူလမ်းကြောင်းမှတဆင့်အရည်, ဓာတ်ငွေ့, slurries သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့ပစ္စည်းများ၏ညှနျကွားမသာထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကဖွင့်ခြင်းနှင့်ကို turn off, ထိန်းညှိ, modulate သို့မဟုတ်ခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအချင်းတစ်ခုလက်မတစ်အစိတ်အပိုင်းကနေအဖြစ်အကြီးစား 30 ပေအရွယ်အစားအထိနိုင်ပြီးဖန်ဆင်းတဲ့တိကျစွာ-ဒီဇိုင်းအလွန်ခေတ်မီဆန်းပြားအအေးစနစ်အားထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်မှဒေသခံဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှာရရှိနိုင်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့သောကြေးဝါအဆို့ရှင်အနေဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုအတွက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခုထူးခြားဆန်းပြားသတ္တုအလွိုင်း။
အဆို့ရှင်အပါးလွှာဆုံးဓာတ်ငွေ့ကနေဓာတုပစ္စည်း superheated ရေနွေးငွေ့, ပွန်းစား slurries, အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေဒီယိုတက်ကြွပစ္စည်းများအလွန်အမင်းစားရန်, အားလုံးအမျိုးအစားများစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ cryogenic ဒေသကနေသွန်းသောသတ္တုမှအပူချိန်နှင့်စတုရန်းလက်မနှုန်းပေါင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မြင့်မားလေဟာနယ်ထဲကနေဖိအားကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအဆို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံအကျဆုံးနှင့်မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာလုံးဝနီးပါးအားလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တိုင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သို့ရာတွင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူလူအားလူသိများအသက်အကြီးဆုံးထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
ယခင်: စက်ရုံတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ရေးစားနပ်ရိက္ခာအဆင့်သံမဏိအနားကွပ် Check Valve
နောက်တစ်ခု: ဂိတ် Valve Din အတုအမြင့်ဖိအား Valve PN16 DN40-DN300
4 လက်မဂိတ် Valve
6 လက်မဂိတ် Valve
8 လက်မဂိတ် Valve
သံတံခါး Valve သို့ကာစ်
ဂိတ် Valve 1 လက်မ
ဂိတ် Valve ပင်မအိတ်စတန်းရှင်း
သံတံခါး Valve သို့ကာစ်, Elbow Fitting, ဂိတ် Valve, လျှပ်စစ် Butterfly က Valve, လိပ်ပြာ Valve, သံမဏိအနားကွပ်,